China 2020 စက်ရုံဆောင်းရာသီအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပစခန်းချနေထိုင်သည့်ဘဲ / ငန်းအိပ်အိပ်အိတ်ရွဲစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | ချစ်သူ
အပြင်ဘက်အားကစားများအရောင်အသွေးစုံလင်သောအမေ၊ အိပ်အိတ် ...
Solid Co နှင့်အတူတစ် ဦး တည်းစာအိတ် Splicable အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ် ...
ရေစိုခံအခွံခံရေစိုခံ - အိတ်ဆောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်သူ့စစ် ...
ရေပူရေအေးခံနိုင်သည့် mummy အမျိုးအစားများ ...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သူသည် ၉၀% ပြည့်နေသောအိပ်စက်ခြင်းသည် ...
2020 စက်ရုံဆောင်းရာသီအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပစခန်းချနေထိုင်သည့်ဘဲ / ငန်း ...
2020 ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူသစ်သည်သက်တောင့်သက်သာသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ...
2020 စက်ရုံဆောင်းရာသီအရွယ်ရောက်ပြီးသူပြင်ပစခန်းချနေထိုင်သည့်ဘဲ / ငန်းအိပ်အိပ်အိတ်လက်ကားရောင်းသူ
ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ကို 20D 400T လေခံနိုင်သော၊ ရေစိုခံနိုင်ပြီးမျက်ရည်စိုခံနိုင်သည့်နိုင်လွန်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အပူကိုထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးအပူပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ လေအေးထဲမ ၀ င်နိုင်အောင်တားဆီးပေးပြီးဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပိုမိုသန့်ရှင်းမှုနှင့်ကျန်းမာစေသည်။
ဒီအိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ကို 20D 400T လေခံနိုင်သော၊ ရေစိုခံနိုင်ပြီးမျက်ရည်စိုခံနိုင်သည့်နိုင်လွန်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အပူကိုထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးအပူပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ လေအေးထဲမ ၀ င်နိုင်အောင်တားဆီးပေးပြီးဘက်တီးရီးယားပိုးသတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်။ နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပိုမိုသန့်ရှင်းမှုနှင့်ကျန်းမာစေသည်။ ဖြည့်တင်းသည့်ပစ္စည်းသည် ၉၀% အရည်အသွေးမြင့်သောအဖြူဘဲဖြစ်ပြီး ၆၅၀ ဂရမ်ပြည့်သောဖြည့်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ဖြည့်တင်းအလေးချိန် ၆၀၀ ဂရမ်ရှိပြီးအလေးချိန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲအအေးမှကာကွယ်နိုင်ပြီးအအေးပေးမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအသုံးပြုသူ၏အမြင်ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သည်။ နှင့်နွေးထွေးမှု။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီလိုမျိုးဘဲမြဲတဲ့ရေဟာရေထုဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးအပူသိုလှောင်ရာမှာခိုင်မြဲနေနိုင်သည့် fluffy ဒီဂရီမြင့်မားသည်။ ဒီအိပ်စက်အိတ်သည်စျေးကွက်ထဲတွင်အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Mummy ပုံစံနှင့်လူကြိုက်များသောအမျိုးအစားလည်းဖြစ်သည်။ ဒီအိပ်စက်အိတ်၏အတွင်းပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 3D (သုံးဖက်မြင်) ဒေါင်လိုက်နံရံနှင့်ခြေထောက်အကွက်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အိပ်နေသည့်အိတ်တစ်လုံး၏အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအသုံးပြုသောကြောင့်အိပ်နေသည့်အိတ်တစ်လုံးစီတွင်မညီမျှမှုကိုထိရောက်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည့်နွေးထွေးမှုထိန်းသိမ်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အပြည့်အဝထူနိုင်သည့် windproof ချည်သည်ဇစ်မှတဆင့်အပူယိုစိမ့်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ လည်ပင်းကော်လာ၏ဒီဇိုင်းကသင့်လည်ပင်းနောက်ကျောမှအပူဆုံးရှုံးမှုကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေစွာအိပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပါးလွှာသောပါးပျဉ်းသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်နွေးထွေးမှုတို့အတွက် U-shaped အပြင် Hood shrink ကြိုး၊ Flap Velcro နှင့်အခြားသောအသေးစိတ်ကျသည့်ဒီဇိုင်းများအားလုံးသည်အိပ်ပျော်နေသောအိတ်ထဲတွင်နွေးထွေးမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်သွားသွား၊ ဘာပဲလုပ်ပါစေဒီအိပ်စက်လွယ်အိတ်ကိုသင့်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်သည်။ ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ ဒါမှမဟုတ်ဘာတွေစိတ်ပူနေတာလဲ သင့်တွင်သံသယရှိနေပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ထမ်းများကသင်၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးသင့်အတွက်အဖြေတစ်ခုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးလိမ့်မည်။
အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ်ရဲ့နွေးထွေးမှု (နှစ်သိမ့်မှု) ကိုရွေးချယ်ပါ။
၁။ သင်စခန်းချမည့်အပူချိန်ကိုခန့်မှန်းပါ။ ဤအရေအတွက်သည်ရာသီအလိုက်နှင့်ရာသီဥတုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသော်လည်းများသောအားဖြင့်သာမန်ခရီးသွား enthusi ည့်သည်များ၏အိပ်စက်ခြင်းအခြေအနေသည်အနုတ် ၇ အကြားဖြစ်သည်℃ နှင့်သုည7အထက် ℃.
၃။ ချိန်ညှိထားသောအပူချိန်တန်ဖိုးအရ၊ အိပ်ပျော်နေသောအိတ်ကိုရွေးရန်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောနွေးထွေးမှု (နှစ်သိမ့်မှု) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုး၏စံနှုန်းများသည်တူညီမှုမရှိသောကြောင့်ထုတ်လုပ်သူများမှပေးသောတန်ဖိုးများသည်ရည်ညွှန်းချက်သာဖြစ်ပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသက်ဆိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ရှေ့သို့ 2020 ဒီဇိုင်းသစ်ထုတ်လုပ်သူသည်ဇိမ်ကျ။ သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်အိပ်။ အိပ်နေသောအိတ်ကိုချသည်
နောက်တစ်ခု: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သူသည် ၉၀% ပြည့်သောအိပ်စက်လွယ်သောအိတ်များကိုအပြိုင်အဆိုင်ဈေးနှုန်းဖြင့်သာလွန်သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထုတ်လုပ်သူသည် ၉၀% ပြည့်သောအင်္ကျီလက် ...
အပြင်ပန်းအားကစားရောင်စုံ Mummy အိပ်အိတ် ...
အိပ်ပျော်နေသောအိပ်ပျော်နေသောအစိုင်အခဲအရောင် splicable တစ်ခုတည်းစာအိတ်
Sol နှင့်အတူတစ်ခုတည်းစာအိတ် Splicable အိပ်ပျော်နေတဲ့အိတ် ...
ရေစိုခံအခွံရေစိုခံ - ရပ်တန့်သယ်ဆောင်မီတာ ...
2021 လူကြိုက်များတောက်ပသောအရောင်ဖြည့် mummy sle ...